मध्यपहाडी सडक खण्डको काम अन्तिम चरणमा – Mero Pradesh
रामेछाप । पूर्वको पाँचथर हुँदै सुदुरपश्चिमको डडेलधुरा र बैतडीसम्म छुने मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत रामेछापमा भित्र पर्ने ४५ किलोमिटर सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
२०७३ सालबाट निमार्ण कार्य शुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको सुनकोशी नदि किनार हुँदै छिमेकी जिल्ला काभ्रे छिचोल्ने गरी सडकको काम रफ्तारमा भइरहेको छ । जिल्लाको दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाको सिमाना छुदै उक्त सडक काभ्रेमा गाभिने छ ।
रामेछाप भित्र पर्ने मध्यपहाडी राजमार्गको ४५ किलोमिटर सडक निमार्णको ट्रयाक ओपन गर्न करिव ७५ करोड रुपैयाँको लागतमा काम शुरुवात गरिएको हो । जसमा अहिलेसम्म अनुमानित करिव ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । बाँकी १० प्रतिशत काम आउने २०७८ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी तिव्र गतिमा सडक निमार्णको काम भइरहेको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका सव–इन्जिनियर शिशिर रमण आचार्यले जानकारी दिए ।
उनले भने– आयोजनाले २०८० सालसम्म सवै सडकको काम सकेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरि भएको सम्झौता अनुसार हामीले सोही गतिमा कामलाई तिव्रता दिएका छौं । रामेछाप भित्र पर्ने ४५ किलोमिटर सडक मध्ये केही ठाउँमा काम गर्न वाँकी छ । त्यो बाँकी काम पनि हामी रफ्तारमा गर्दै छौं । रामेछाप भित्रको सडक आगामी २०७८ सालसम्म ट्रयाक ओपन गरिसक्ने र ८० सालभित्र कालोपत्रे गरीसक्ने गरी काम भइरहेको सब–इन्जिनियर आचार्यले बताए ।
मध्यपहाडी राजमार्गले जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम रामेछाप नगरपालिकाको रामेछाप बजार र सदरमुकाम मन्थली नगरपालिकाको मन्थली बजार हुँदै खाँडादेवी गाउँपालिका र सुनापति गाउँपालिकाको केन्द्र भएर छिमेकी जिल्ला काभ्रे जोडिनु पर्ने रामेछापबासीको माग भएपनि उक्त माग पुरा भने हुन सकेन ।
मध्यपहाडी राजमार्ग रामेछाप जिल्लावासीहरुको भविष्यसँग जोडिएको मेरुदण्डको सडक हो । तर उक्त सडकले नत पुरानो सदरमुकाम रामेछापको केन्द्र नै छोएको छ । नत मन्थली सदरमुकामको विच भुभाग नै छोएको छ । यसरी सदरमुकाम नै नछोइ बाहिरी छेउवाट गएको सडकले जिल्लाको बिकासमा यसले ठूलो असर पार्ने नागरिक समाजका सदस्य बद्री नयाँघरे बताउँछन् ।
उनले भने– मध्यपहाडी राजमार्ग सडक सर्भे गर्दा नै रामेछापको केन्द्र हुँदै काभ्रे छोडिनु पर्ने हो । तर सडकको सर्भे गर्दा जिल्लाको केन्द्र नपारी जिल्ला मात्रै छुने हिसाबले जुन सर्भे भएर सडक निमार्णको अन्तिम चरणमा पुगेको छ यसले जिल्लालाई दिर्घकालिन रुपमा ठूलो असर पार्ने धारणा राखे ।
विपी राजमार्गले पनि नछोएको रामेछापको सदरमुकाम मन्थली पुनः मध्यपहाडी राजमार्गले समेत नछुने गरी निमार्ण भएको सडकले आम रामेछाप जिल्लामा व्यवसाय संचालन गर्दै आएका व्यवसायिहरुको हित विपरित भएको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनले भने– विपी राजमार्गले नछुदा रामेछापका आम व्यवसायीहरुले धेरै हैरानी र दुःख झेल्दै आएका छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग भनेर खनिएको सडकले सदरमुकाम छुनु पर्ने हो, छोएन ? यो जिल्लाकै दुर्भाग्य पूर्ण कुरा हो ! सदरमुकाम नै नछोइ गएको सडकलाई कसरी मध्यपहाडी भन्नु ? मध्यपहाडी सडकवाट सदरमुकाम मन्थलीसम्म पुग्न १३ किलोमिटर टाढा जानु पर्ने वाध्यता रहेको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग नाम दिइएको उक्त सडक रामेछापका ८ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये जम्मा चारवटा पालिकाको बस्नी नै नभएको छेउछेउलाई मात्रै समेटेर जाने छ । चारवटा पालिकाको केही भू–भाग समेटेको उक्त सडकले जिल्ला सदरमुकामसम्म जोडिएको खण्डमा कोशेढुङ्गा सावित हुने जिल्लावासीहरु बताउँछन् ।